ဘိုဟ်ရီယမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆီဘော်ဂျီယမ် ← ဘိုဟ်ရီယမ် → ဟက်စ်စီယမ်
အတည်ငြိမ်ဆုံး ဘိုဟ်ရီယမ်၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
syn 1 min α 8.93 266Db
syn 1.5 s α 9.35 267Db
syn 11 s α 9.02 268Db
syn 44 s α 8.8 270Db
ဘိုဟ်ရီယမ် (Bohrium) ဒြပ်စင်သည် ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်စင်တခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ဒြပ်ခွဲခန်း၌သာ ဖန်တီးထုတ်ယူ ရရှိနိုင်သည်။ silver သို့မဟုတ် မီးခိုရောင်ရှိသောဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြသည်။ ၎င်း၏သင်္ကေတမှာ Bh ဖြစ်ပြီး အက်တမ်အမှတ်စဉ် (atomic number) ၁၀၇ ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ တည်ငြိမ်မှုအမြင့်ဆုံးရှိသည့် အိုင်ဆိုတုပ် အမှတ်စဉ်မှာ 270Bh ဖြစ်၍သက်တမ်းဝက်(half-life)မှာ ၆၁ စက္ကန့်ဖြစ်သည်။ Bohrium ဒြပ်စင်ကို ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင်ဂျာမန်ရူပဗေဒပညာရှင် Peter Armbruster နှင့် Gottfried Munzenberg တို့မှ ဂျာမနီနိုင်ငံ Hesse ပြည်နယ် Darmstadt မြို့ရှိ GSI ကောလိပ်ရှိ ဓာတ်ခွဲခန်းမှစတင်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ Bohrium ဟူသောအမည်သည် ဒိန်းမတ်ရူပဗေဒပညာရှင် Niels Bohr အားဂုဏ်ပြု သောအနေဖြင့်သတ်မှတ်ပေးရန် IUPAC သို့ ၎င်းဒြပ်စင်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော ဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင်များမှ တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့သောကြောင့် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ၎င်းအမည်ကို အတည်ပြု သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းဒြပ်စင်သည် အလွန်မတည်မြဲသောဒြပ်စင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းဒြပ်စင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး အလွန်လျင်မြန်စွာ အခြားဒြပ်စင်များအဖြစ်သို့ ပြိုကွဲပျက်စီးသွားသောကြောင့် လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေး အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
Bohrium ဒြပ်စင်၏သက်တမ်းဝက်(half-life)သည် ၆၁ စက္ကန့်ခန့် အလွန်တိုသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ သက်ရောက်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာမလိုပါ။
↑ "Ionization potentials and radii of neutral and ionized species of elements 107 (bohrium) and 108 (hassium) from extended multiconfiguration Dirac–Fock calculations" (2002). The Journal of Chemical Physics 116 (5): 1862–1868. doi:10.1063/1.1430256. Bibcode: 2002JChPh.116.1862J.
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ Hoffman၊ Darleane C.; Lee၊ Diana M.; Pershina၊ Valeria (2006)။ "Transactinides and the future elements"။ in Morss; Edelstein၊ Norman M.; Fuger၊ Jean (eds.)။ The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd ed.)။ Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media။ ISBN 1-4020-3555-1။
↑ ၆.၀ ၆.၁ FUSHE (2012)။ Synthesis of SH-nuclei။ August 12, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Synthesis ofaNew Element with Atomic Number Z=117" (2010-04-09). Physical Review Letters 104. American Physical Society. doi:10.1103/PhysRevLett.104.142502. PMID 20481935. Bibcode: 2010PhRvL.104n2502O. (gives life-time of 1.3 min based onasingle event; conversion to half-life is done by multiplying with ln(2).)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘိုဟ်ရီယမ်&oldid=722889" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။